PressReader - Isolezwe: 2019-01-10 - Umbango wezikhundla esikoleni esishisiwe
Umbango wezikhundla esikoleni esishisiwe
Isolezwe - 2019-01-10 - IZINDABA - BONISWA MOHALE
KUVELA ukuthi kunombango oshisa phansi wezikhundla sokuba wuthishomkhulu nesephini lakhe esikoleni iMvuzo High esishiswe entathakusa ngeSonto.
Lokhu kuvele emhlanganweni ophuthumayo obuyizolo eMvuzo High, eseFrance, eMgungundlovu.
Ithumba liqhunjuzwe nguMnuz Dumisani Shandu owayeyiPhini likaSihlalo wesigungu esilawula isikole esahlakazwa.
Uthe ngesikhathi iMvuzo High ingakathutheli eFrance babengenazo izehlo zobugebengu futhi nothisha babeyimbumba ngoba baningi ababebheke isikhundla sokuphatha uma iMvuzo isiseFrance.
“Isikole sesigqekezwe izikhawu eziwu-16 kodwa kuyamangaza ukuthi esidala sasingagqekezwa phezu kokuba sasingenawo amawindi. Ngeke ngithi inkinga wumphakathi ngoba siyasebenzisana nezinhlaka ezithintekayo futhi umphakathi uyiso lesikole kodwa kunombango oshisa phansi oqale emuva kokuqokwa kukathishomkhulu. Baningi ababesibhekile isikhundla. Kuthe uma kufakwa omunye umuntu kwaqala kwanezinkinga esikoleni,” kusho uShandu.
Uthe kumanje iMvuzo High ayinaso isigungu esilawula isikole kodwa kunabantu ababesesigungwini esidala abavala amasango esikole.
Njengoba izingane zakwezinye izikole beziyoqala ukufunda eMvuzo High bekungabonwa noyedwa umfundi futhi nothisha bathe bebesaba ukuya esikoleni emuva kokuthi sishisiwe kwaze kwalinyazwa nezimoto zabo emhlanganweni akade benawo ngoLwesibili.
UMnuz Sandile Madlala onguthishomkhulu waseMvuzo High uthe banqume ukuthi baye eseketheni ngosuku lokuvulwa kwezikole bangayi esikoleni ngoba othisha bazibona bengaphephile. Uthe abafundi baphatha izikhali esikoleni, abazali abayihambeli imihlangano wathi udinga uxhaso emnyangweni nasemphakathini.
UNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Mthandeni Dlungwane, uthe iyamcika indaba yokubangwa kwezikhundla ngoba iphazamisa imfundo nekusasa lezingane. Ucele othisha ukuthi bangazibangi izikhundla ngoba miningi imisebenzi esazovela eMnyangweni wezeMfundo abale kuyo eyabaluleka ngezifundo, abaphathi bamasekethe nezinye izikhala ebezingagcwalisiwe.
Uthe ulindele umbiko ozochaza ukuthi kungani kufinyelelwe esinqumeni sokuvala isikole. “Sizosilungisa isimo eMvuzo High futhi sizoseka isikole ngakho konke esikudingayo. Ngeke sibushintshe ubuholi obukhona. Labo abangazange bazithole izikhundla kufanele bamukele ukuthi abazitholanga baseke ubuholi obukhona esikoleni,” kusho uDlungwane.
Uxwayise othisha abasebenzisa izingane ukufeza izinhloso zabo ukuthi baqaphele ngoba uma bebanjwa bazobikwa ophikweni olubhekelele ukusebenza kothisha bese bephucwa amalayisensi okusebenza.
Isithombe: NQOBILE MBONAMBI/ AFRICA NEWS AGENCY (ANA)
UNGQONGQOSHE wezeMfundo KwaZuluNatal, uMnuz Mthandeni Dlungwane, uthi ngeke babushintshe ubuholi besikole iMvuzo High noma ngabe ukushiswa kwaso kuhlobene nombango wezikhundla